Porn သုံးစွဲသူလူငယ်များသည်သင်၏ Mooh - Porn On Brain On Your Mojo ကိုပြန်လည်ရယူရန် ပို၍ လိုအပ်သည်
streaming porn, ပြွန် - site များမှတဆင့်ကယ်နှုတ်တော်မူသည်ဆယ်ကျော်သက်လိင် rewiring?
ယောက်ျားတွေပထမဦးဆုံးနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်ပြသသည့်အခါ 2006-07, ပတ်ပတ်လည် နာတာရှည် porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများသူတို့ဟာယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်လကြာညစ်ညမ်းမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်အနည်းဆုံးမရှိသောပြန်လည်နာလန်ထူလာခဲ့သည်။ အများစုမှာကွန်ပြူတာမှော်ဆရာများဖြစ်ပြီးဝက်ဝံမတိုင်မီမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် porn ကိုဝယ်ယူကြသည်-ပြီးတော့တီထွင် uncharacteristic စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ အစစ်အမှန်လိင်စဉ်အတွင်း။ သူတို့ကို“ Oldtimers” လို့ငါတို့ခေါ်မယ်။
အသက်အရွယ်နုပျိုသောယောက်ျားတွေ (အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်နှင့်နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်) ၏တစ်ဦးကလွှမ်းမိုးသောအတူတက်ပြသ တူညီတဲ့ erectile-ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြဿနာတွေ။ လျှင်မြန်စွာသူတို့ဖွဲ့စည်း ဧည့်သည်များ၏အများစု ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာပြcomplနာများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းခြင်းခံရသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့၎င်း၊
ဤလူငယ်လူရွယ်များ (“ မျက်နှာသစ်များ”) သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကြာကြာလိုအပ်သည် (တစ်ခါတစ်ရံလအတွင်းရှည်) သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများမှထမြောက်ရန်။ တကယ်တော့အချို့အမှန်တကယ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူပုံမှန်အဆက်အသွယ်လိုအပ်-၎င်းသည်ကျပန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကမ္ဘာပေါ်တွင်စိန်ခေါ်မှုရှိသော“ ကြက်နှင့်ဥ” ပြproblemနာဖြစ်သည်။
[၅၁ နှစ် ၅၀] ကျွန်ုပ်သည် ၆၅ ရက်ပတ်လုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ Viagra ကိုတောင်မကူညီဘူးဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာတယ်။ ငါစိတ်ဓာတ်ကျနှင့်အပူတပြင်းလာပြီခဲ့သည်။ ငါလပေါင်းများစွာ ED ကုစားရှာဖွေနေခဲ့သည်။ ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်များကိုဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း၊ ကြွက်သားထုထည်တိုးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုလက်စထရော၊ ငါနင့်ကိုအိုမင်းရခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ငါထင်ခဲ့တာပဲ။ ငါညစ်ပတ်တဲ့ကြက်ဆင်ကိုရပ်တန့်လိုက်တယ်။ အကယ်၍ porn ကကျွန်ုပ်ကိုအမှန်တကယ်လိင်မှုကိစ္စဆုံးရှုံးစေလျှင်၎င်းသည်မထိုက်တန်ပါ။
အကြှနျုပျ၏ပြန်လည်နာလန်ထူတက်နှင့်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်များကကျွန်ုပ်၏မနက်ခင်းစိုက်ခင်းများသည်တသမတ်တည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်နှစ်များတွင်ငါမလုပ်ခဲ့သောခဲယဉ်းသောစိုက်ထူမှုများရရှိခဲ့ပြီးသူတို့ကိုတစ်ချိန်လုံးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ပြီးတော့သုတ်ရည်လွှတ်မှုဟာပိုပြီးလွယ်ကူလာပြီးအများကြီးပိုကောင်းလာတယ်။ လိင်မှုကိစ္စကိုလည်းပြန်ပေါ်လာသည်။ ငါလိင်အတွက်စိုက်ထူရန်ခက်ခဲသောအချိန်မတိုင်မီကကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ထုံထိုင်းနေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ယောနိသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုလျှောလျှောလျှောလျှောလျှောစီး။ ရှိပြီ ဖြစ်၍ အံ့သြစရာကောင်းသည်။
အကြှနျုပျ၏ ED 90% သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ DO ပြဿနာ Non-တည်ရှိမဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တောင်မှသူ့အဘို့လည်းအစာရှောင်လာပေမယ့်လိင်အများကြီး သာ. ကောင်း၏။ ငါသည်တကယ့်ကိုခက်ခဲစိုက်ထူဖို့နှိုးအများဆုံးနံနက်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်ထိထိမိမိမပါဘဲပြုလုပ် 20-30 မိနစ်အထိကြာရှည်ခံသည်။ ငါ 49 ဟောင်းနှစ်ပေါင်း freaking ဖြစ်၏။ အဘယ်သူသည်ငါ့အဆယ်ကျော်သက်လားပြန်လာလိမ့်မည်ဟုထင်ကြလိမ့်မယ်! အကြှနျုပျ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာငါ့အကြားဆက်ဆံရေးပိုကောင်းသာဘာလို့လဲဆိုတော့အများကြီး သာ. ကောင်း၏။
ကျွန်ုပ်သည် ၁၄၁ နေ့တွင် porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုပါ။ ငါမှာ ED ပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသုတ်ရည်လွှတ်မှုပြ,နာတွေ၊ အားနည်းတဲ့စိုက်ထူမှုတွေနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနိမ့်ကျတဲ့အရာတွေကိုနှောင့်နှေးခဲ့တယ်။ အခု ၅ လနီးပါးကြာရင်တောင် ၈၅-၉၀% ခံစားရတယ်။ ငါပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေမှာလိင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ငါ rewire နေဆဲလိုခံစားရတယ် (ငါတသမတ်တည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိုအပ်လိမ့်မယ်ထင်) ငါခံစားရတယ်, ဒါပေမယ့်ငါအများအားဖြင့်အနာပျောက်။ လိင်သည်ညအချိန်တွင်အလွန်ရှည်လျားသောအရက်သောက်ပြီးသောအခါဖြစ်သည်။ ငါအရမ်းအထိခိုက်မခံခဲ့ပေမယ့်ငါ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်ကောင်းသည်နှင့်နှစ် ဦး စလုံးပါတီများအဘို့အကောင်းတစ် ဦး အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်
အဘယ်ကြောင့်နုပျို ED ၏ဤလမ်းကြောင်းသစ်?
ဖြစ်နိုင်တယ် ဒီကံဆိုးလမ်းကြောင်းသစ် ၏သဘာဝရလဒ်ဖြစ်ပါသည် အလွန်အမင်းပျော့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက် highspeed (ဆိုလိုသည်မှာ hyperstimulating) porn နှင့်အတူတိုက်မိ။ မကြာမီကသုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေလိင်အခြေအနေနိုင်ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးကိုမည်သို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့် ထူးခြားတဲ့အားနည်းချက် ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ကဒီအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ (အောက်တွင်ပို။ )
သင်မြင်သည် Oldtimers အပျိုဖော်ဝင်စမှာ masturbating စတင် မပါဘဲ အရှိန်အလွန်မြန်သော။ သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်၊ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်လိင်အလုပ်အကိုင်ကိုကတ်တလောက်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဗီဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ (သို့) အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် (ဒီနေ့လူငယ်များအတွက်) သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့စတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်ရှိခဲ့ပါတယ် အချို့သော သူတို့ highspeed porn ၏စာလုံးပေါင်းအောက်တွင်ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့် overconsumption လက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးပြီးရှေ့တော်၌စစ်မှန်သောလက်တွဲဖော်နှင့်အတူလိင်, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးပိုးပန်း။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Oldtimers သည်သူတို့၏ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်ကိုယနေ့ခေတ်လူသစ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားစွာလေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်-အဘယ်သူသည်ကိုမကြာခဏ highspeed porn (အသက် 10 န်းကျင်အများအပြား) ကို အသုံးပြု. တစ်ကိုယ်တော်လိင်ရှာဖွေတွေ့ရှိ, ထိုသို့သုံးပြီးရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။
တနည်းအားဖြင့်အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါသည် မဟုတ် တစ်ဦးတိုတောင်းပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်သော့ချက် variable ကို။ အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်ဖို့ exposure highspeed မှကြိုတင် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး 22 နှစ်အရွယ် said:
ငါအင်တာနက် porn မကြည့်မီသို့မဟုတ် ED ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မတိုင်မီလိင်နှစ်ပေါင်းခဲ့သည်။ ငါအသက် ၂၂ နှစ်မှာ ED မဖွံ့ဖြိုးခင် ၂.၅ နှစ်လုံးလုံးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပဲလုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ၈ ပတ်ကြာအောင်ငါ porn သို့မဟုတ် masturbation မရှိခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% သို့ပြန်သွားလျှင်ကျွန်ုပ်မသိရပါ။ သို့သော် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသောတစ်နေရာရာသို့မရောက်ပါ။ ငါတပြင်လုံးကိုရှောက်သွားလေ၏ သေလွန်သောသူတို့သည်-ဒစ်ကာလ နှင့်အရာအားလုံး။ ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာငါလိင်အကြောင်း3ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် 1th ရက်သတ္တပတ်အပြီးဖြစ်ခြင်း။ ငါဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖြတ်သန်းသွားအမှန်တကယ်ဝမ်းသာတယ်။ ငါကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်ကဲ့သို့ငါလိင်တံကိုချစ်။ ဟားဟား!!!!
ဒီမှာ Oldtimer င်:
ငါအသက် ၁၃ နှစ်ကတည်းကစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတယ်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကိုမရခင်အထိကျွန်တော့်အတွက်ဘယ်တော့မှပြaနာမရှိဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်အထိငါမှာ command တိုင်းမှာသုတ်သင်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့တယ်။ သို့သော်အမြန်နှုန်းမြင့်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်အချိန် ၄၀% ကိုချန်ထားလျှင်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်မကြာခဏဖြစ်လာသည်။
ရဲရင့်အသစ်က porn ကမ္ဘာကြီး
တိုတိုပြောရရင်အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားပြီ။ အပျိုဘော်ဝင်ချိန် မှစ၍ (သို့မဟုတ်) မတိုင်မီကလူငယ်များသည်သူတို့၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအင်တာနက်မှအများအားဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည်။ အချို့က၎င်းမပါဘဲအထွတ်အထိပ်ရောက်သည်ကိုမမြင်နိုင်ပါ။
ထိုသို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုသည်လူ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင်ထူးခြားသည်။ သို့သော်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများနှင့်နောက်ကွယ်သိပ္ပံပညာများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မရှင်းပြမီ၊ ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အတော်လေးပျော့များမှာ.
ငါတို့ကောင်းစွာထူထောင်ထားတယ် အာဏာအရှိဆုံးအမှတ်တရများ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်သတင်းအချက်အလက်သစ်များ-အထူးသဖြင့်မိတ်လိုက်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဘို့အထူးသဖြင့်မှည့်သောအခါဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏စွမ်းရည် ဝါယာကြိုးတက်သစ်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ အသစ်ကအာရုံကြောဆက်သွယ်မှု (synapses) ၏ဘီလီယံအဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဖန်တီးသည့်အခါ 11 သို့မဟုတ် 12 တဝိုက်မှို။ သို့သော်လူကြီးများက သူ့ဦးနှောက်ကသူ့အာရုံကြော circuitry သုတ်သင်ရမယ် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီမံခန့်ခွဲဌန်နှငျ့အတူသူ့ကိုထားခဲ့ဖို့။ မိမိအနှစ်ဆယ်ကျော်အသုံးပြုပုံသူအတိအကျမကျမည်အကြောင်း မှီဝဲ လိင် proclivities နှင့်အတူသူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသို့ကျရောက်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူ့ဦးနှောက်ကိုမလျစ်လျူရှုဖို့လွယ်ကူသို့မဟုတ်ပြန်လည်စီစဉ်ထားရှိရန်အတွက်နက်ရှိုင်းသော ruts ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လူ့ဦးနှောက်သိသိသာသာအာရုံခံတိုးတက်မှု၏နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်ကတဆင့်သွားပါ: တစျခု သန္ဓေသားဘအတွက် အများစုယောက်ျားလေးများ (နှင့်ယခု, များစွာသောမိန်းကလေးများ) ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှာကိုကြည့်ဖို့စတင်ဖွင့်သည့်အခါအသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးလပေါင်းများစွာ, 10 နှင့် 13- ၏အသက်အရွယ်အကြားအခြားတစ်လျှောက်လုံး။ အကောင်းဆုံးကတော့, ဒီနေစဉ်အတွင်း ဝေဖန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလကျနော်တို့လူသားမြားသအသက်အရွယ်-သင့်လျော်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ပရောနှင့်အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ။
ဤဒုတိယ rewiring စိတ်ပြင်းထန်ခြင်းထို့နောက်မြှောက်ပါဝငျနှင့် နှုတ်ခြင်း အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု၏။ အတူတူ, မျိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ဦး နှောက် cortex ၏ရွှံ့စေးကိုထုလုပ်သည်။ အသုံးပြုမှု-It-or-ဆုံးရှုံး-ကဆက်လက်အဖြစ်သူ့ဟာသူ, ဦးနှောက် reorganizes နှင့်ဒဏ်ငွေ-တီးလုံး:
ကောင်းစွာအသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့အာရုံကြောလမ်းကြောင်းခိုင်ခံ့စေနေစဉ် cortex သုတ်သင်ပယ်ရှင်းအနည်းငယ်သာ, ဆားကစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရုပ်ဆိုးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အာရုံကြောဆဲလ် axon အာရုံကြောများ၏မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်, myelin နှင့်အတူပိုကောင်း insulator တွင်လည်းဖြစ်လာသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိကြောင်း Little ကအကိုင်းအခက် (ကိုခေါ် dendrites) ပိုကောင်းဝင်လာသော signal ကိုနားထောငျစပျစ်နွယ်ပင်ကဲ့သို့အပေါက်ပါဘူး။ axon နှင့် dendrite အကြားဆက်သွယ်မှု (synapses) ခိုင်မာတဲ့ဆားကစ်ပေါ်မှာများပြားခြင်းနှင့်အားနည်းသောသူတို့ကိုမအပေါ်ကွယ်ပျောက်။ အဆုံးမှာ သင်အချိန်များ၏စမ်းသပ်ရပ်ကြောင်းအမှတ်တရများ, ကျွမ်းကျင်မှု, အလေ့အထများ, ဦးစားပေးများနှင့်ဖြေရှင်း၏နည်းလမ်းတွေရှိတယ်. (Dobbs တို့က, အလေးပေး) ကဆက်ပြောသည်
ဒီထက်မီးအသုံးအနှုန်းများမှာတော့ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများ-မရှိဘဲကန့်သတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံး, pubescent, အာရုံခံတိုးတက်မှုနှုန်း spurt စဉ်အတွင်းဘယ်လောက်အရေးပါသဘောပေါက်။ သုတေသီအရ ဂျေး Giedd,
ဒါကြောင့်သူတို့ကအနီး / လူကြီးရောက်ရှိဖို့အဖြစ်ယောက်ျားတွေ highspeed porn အသိပေးစာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများအပေါ်အစောပိုင်း start သူတစ်ဦး fluke လား? မဖြစ်နိုင်ဘူး။ Dopamine လှုပ်ရှားမှု, အရာ အင်အားကြီးစိုက်ထူသည်အတွက်ထိပ် အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် နှင့်ပယ်ချ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိဖို့ အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်သည်။ ဒီလူတွေအနေနဲ့မငြင်းနိုင်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသတိထားမိတတ်လာတဲ့အချိန်ပါပဲ။
သင်သို့မဟုတ်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်မမျှော်လင့်ဘဲအရူးအမူးစွဲခြင်း၊ အုပ်စုလိုက်မုဒိမ်းမှု၊ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်သုတေသနပညာရှင် Jim Pfaus သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများကိုအောင်မြင်စွာပင်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည် ရန်ငယ်ရွယ်နို့တိုက်သတ္တဝါများအခြေအနေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ cadaverine (လူ့ဇာတိဆွေးမြေ့၏အနံ့) ။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကြွက်များသည်အသားများပျက်စီးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သည်။ ဒါဟာပင်င်; ဒါကလေ့လာသင်ယူထားတဲ့အပြုအမူမဟုတ်ဘူး။ သူတို့သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ် cadaverine တွင်စိမ်ထားသောသစ်သားရွက်တိုင်ကိုသင်္ဂြိုဟ်ကြလိမ့်မည်။ Pfaus သည်လက်ခံသောမိန်းမများကို cadaverine ဖြင့်ပက်ဖြန်းပြီးကလေးငယ်များနှင့်အတူလှောင်အိမ်ထဲသို့ထည့်သည်။ ကညာယောက်ျား သူတို့ရဲ့ V- ကဒ်များဆုံးရှုံးဖို့ရှာဖွေနေ။ သေချာတာပေါ့, အထီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာမိတ်လိုက်နှင့် ejaculated ။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကြွက်ငယ်လေးများသည်ပုံမှန်အနံ့ရှိသောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်သေခြင်းကဲ့သို့အနံ့ဆိုးနေသောလှောင်အိမ်ကြီးတစ်ခုတွင်ရှိနေသည်။ cadaverine မှကြွက်များကိုနှစ်မျိုးစလုံးနှင့်အတူမိတ်လိုက်သည်။ ပုံမှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားများသည်မည်မျှပင်ချိုသာသည့်အတိုင်းပင်သေခြင်းကဲ့သို့အနံ့ခံသည့်အမျိုးသမီးများနှင့်မသွားနိုင်ပါ။
ထို့အပြင်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်နောက်ပိုင်းတွင်အေးစက်အထီး cadaverine အတွက်ပြည့်နှက်နေတဲ့သစ်သား Dowel ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကအတူကစား, သူတို့ Dowel ထိုကဲ့သို့သောချောကလက်သို့မဟုတ်အင်္ဂါဇာတ်လျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ်, သူတို့ကတကယ်ကိုချစ်တစ်ခုခုနှင့်အတူဧည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဖြစ်အများအပြားကချိုးဖဲ့။
ဒီတော့ဘာကြောင့်ဒီနေ့ခေတ်လူသစ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကန့်အသတ်အများဆုံးပေးသလဲ။ အစစ်အမှန်ရွယ်တူမဟုတ်ပေမယ့် porn ။ ကြွက်များနှင့်လူသားများသည်အသားပုပ်ပျက်သည့်အနံ့ကိုမကြိုက်သကဲ့သို့ယနေ့ခေတ်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်အဘယ်အရာကိုမကြိုက်ကြပါ သူတို့မှတိုးပွားလာပါတယ်။ "အဲဒါခက်ခဲရှုပ်ထွေးတယ်။"
ဓာတ်လှေကား dopamine နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကိုပြောင်းလဲမှုများ
ဤတွင်လိင်အရသာကိုအလွန်အမင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည်ဟုသက်သေအထောက်အထားများပိုမိုတွေ့နိုင်သည်။ ကြွက်တစ်ကောင်သည်ဖြစ်နိုင်သည် တစ်ဦးလိင်တူချင်းမိတ်ဖက်ကြိုက်တတ်တဲ့မှအေးစက် မိမိအ dopamine တက် jacking အားဖြင့်။ ပြီးတော့သိပ်မကြာပါဘူး သုတေသီများသည်ကြွက်တုံးအား dopamine agonist (dopamine တုပသည့်ဆေး) ဖြင့်ထိုးသွင်းပြီးနောက်အခြားအထီးတစ်ကောင်နှင့်လှောင်အိမ်ထဲထည့်ခဲ့သည်။ ကြွက်နှစ်ကောင်သည်တစ်ရက်တည်းအတူတူနေခဲ့ရသည်။ (dopamine agonist သည်တစ်နေ့ခန့်တွင်စနစ်မှပြတ်သွားသည်။ ) သုတေသီများက ၄ ရက်ခြား။ ၂ ကြိမ်ထပ်မံပြောဆိုခဲ့သည်။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် reconditioned အထီးစမျးသပျခဲ့သညျ။ မိမိအမှုစနစ်မ dopamine agonist နှင့်အတူသူသည်မိမိအအထီးရဲ့ buddy နဲ့လိင်လက်ခံအမျိုးသမီး (အ dopamine ကသူ့စနစ်၏ထွက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုမှတ်မိ) နဲ့တစ်ဦးလှောင်အိမ်သို့ထားရှိခဲ့ပါသည်။ အများဆုံးအပေါ်သူ့ကိုလှည့်အရာကြွက်ခန့်မှန်း? ပိုပြီးစိုက်ထူပိုပြီးလိင်အင်္ဂါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်သာမန်အထီး mounting အပြုအမူဆန့်ကျင်တောင်မှအမျိုးသမီးကဲ့သို့မြှူဆွယ်တောင်းခံဟူ.လည်း: သူကအထီးမှပိုပြီးတုန့်ပြန်ပြသခဲ့သည်။
ဘာသင်ခန်းစာ? မြင့်မားသော dopamine သည် ဦး နှောက်ကိုအားကောင်းစေပြီးလိင်အရသာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ သုတေသီများကကြွက်မသည်လိင်တူချစ်သူမဟုတ်ကြောင်းနှင့်အခြားကြွက်ကိုမကြိုးပမ်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးသူကျိန်းသေပြောင်းလဲသွားတယ်ခဲ့သည်။ အလားတူပင်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း cannnot သင့်ရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ကိုပြောင်းလဲပေမယ့်သင် excites porn အမျိုးအစားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဤတွင်အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများအတွက်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တည်နိုင်သည်။ ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်သည် (၁) အထိအတွေ့အထိအများဆုံးဖြစ်သည် dopamine အချက်ပြ နှင့် (2) စွဲမှအားနည်းချက်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့လှုံ့ဆော်မှုအသစ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဦး နှောက်မဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဤသည်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအရ ဦး နှောက်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သူတို့ကလိင်မှုဆိုင်ရာအကြီးမားဆုံးသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသည့်မည်သည့်လှုံ့ဆော်မှုကိုမဆိုလိင်သတ်မှတ်ရန်သင်ယူကြသည်။ cadaverine ရနံ့ရနံ့များကိုတန်ဖိုးထားသည့်ကြွက်များမှတွေ့မြင်ရသည့်ဤသင်ခန်းစာသည်အစွမ်းထက်သည့်သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။
အဲဒါကိုဖြစ်ပေါ်လျှင်မတူဘဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် ပို. elastic ဖြစ်ပါသည် ပြီးနောက် သာမန်မိတ်လိုက်ပုံစံများကိုထူထောင်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သိပ္ပံပညာရှင်များအထီးတစ်လက်ခံအမျိုးသမီးမိတ်ဆက်ပြီးတော့တစ်မိနစ်အကြာကသူ့လှောင်အိမ်ထဲကသူမ၏ yanked ။ ဒါကပုံမှန်ထက်အများကြီးပိုမြန် ejaculate သူ့ကိုအေးစက်။ ယောက်ျားသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကာလအတွင်းကဒီပုံစံသင်ယူတယ်ဆိုရင်သူတို့နောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးမှမပြတ်မတောက် access ကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်အခါ, ထိုသူတို့အား-ပင်အတူ flyer ။
ခြားနားချက်ကိုကြည့်ရှုရန်သုတေသီများသည် (ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်လိင်လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသော) အတွေ့အကြုံရှိသောယောက်ျားများအားတစ်မိနစ်အကြာတွင်အမျိုးသမီးများကိုနင်းခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောသုက်ရည်ကြမ်းရန်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားအစကတည်းကအေးစက်စေသောကြွက်များနှင့်မတူဘဲ၊ အတွေ့အကြုံရှိသောကြွက်များသည်အမျိုးသမီးများထံအဆက်မပြတ် ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည့်အခါပုံမှန်မိတ်လိုက်ခြင်းအကျင့်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့ပညာရေးကနေပြန်လည်ယောက်ျားတွေထဲကနေအဘယ်သို့ကြားနာရသည်နှင့်အတူတက်ဒါဟာသုတေသနလိုင်းများ။ သူတို့ရဲ့လိင်သဘာကိုတီထွင်တဲ့သူယောက်ျားတွေ ရှေ့မှာ သူတို့သာ ED မှထမြောက်ဖို့လစုံတွဲတစ်တွဲလိုအပ်ပါတယ်အင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစောစော masturbating စတင်ခဲ့သူကိုယောက်ျားတွေမကြာခဏကျေနပ်လိင်ရှိသည်ဖို့တောင်ရှည်ခြောက်လသို့မဟုတ်အထိလိုအပ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာသူတို့ရဲ့မိတ်လိုက်စွမ်းရည်တွေကိုအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်တွေထက် Pixels တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်။ သူတို့၏လေ့ကျင့်မှုသည်၎င်းတို့ကိုတကယ့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ် (သို့မဟုတ်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်ပင်) ပုံမှန်ပျော်မွေ့ရန်မပြင်ဆင်ထားပါ။ ဒါဟာဘောလုံးကိုရိုက်ရတာနဲ့တူတယ်၊ ယောက်ျားများသည်မှားသောအားကစားအတွက်လေ့ကျင့်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် (လျှင်?) သူတို့သည်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့်အခါဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအနမ်းသည် tabs ၁၀ ခုဖွင့်ထားသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ခုန်ချခြင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ခြင်းသည်သင်၏အဖေတစ်ခါမျှမကြားဖူးသောလက်ဝဲလက်ဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုသင်ယူခြင်းသည်သင့်အားပထမဆုံးအခြေစိုက်စခန်းသို့မသွားစေနိုင်ပါစေနှင့်။ ကျေနပ်စရာတစ် ဦး တည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ အမှန်မှာ၊ ယနေ့လူငယ်များသည်ပိုးပန်းခြင်းနှင့်လိင်သင်ယူခြင်းများအထိအမှတ်တမဲ့လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည်။
(အသက် ၂၂ နှစ်) ဒါဆိုပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုငါ့နေရာကိုပြန်ခေါ်လိုက်တယ်။ သူမလုံးဝဆေးလိပ်သောက်နေတယ်၊ ငါမူးပြီလို့ငါပြောတယ် တစ်နှစ်အကြာတွင်အခြားပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ချိတ်ဆက်မိခဲ့သည်။ ငါ့မှာဝိုင်ခွက်တစ်ခုပဲရှိပေမယ့်ငါမသောက်နိုင်သေးဘူး။ ငါစိတ်ပျက်သွားတယ် မိန်းကလေးများနှင့်အတူကပဲထူးဆန်းတဲ့နှင့်သဘာဝခံစားရတယ်။ သူတို့ကိုငါကိုင်ပြီးသူတို့နဲ့အတူရှိနေရတာကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး၊ ငါအရမ်းညစ်ညစ်ပတ်တဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဟောင်းကိုသုံးနေပြီ ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ၊ ဖြစ်နိုင်ရင်တောင်ငါတွေးမိတယ်။ ငါ့ ဦး နှောက်ထဲကို ၀ င်လွန်းလို့အရမ်းပူနေလိမ့်မယ်။
လိင်မှုဆိုင်ရာအေးစက်မှုကယနေ့ခေတ်မျက်နှာသစ်အသစ်များသည် pixel များနှင့်ကြမ်းတမ်းသောပွတ်တိုက်အားဖြင့်သာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုအဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမသုံးတော့သည့်တိုင်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်သမားရိုးကျလိင်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်ရန်ခက်ခဲနေသည်ကိုရှင်းပြနိုင်ပါသလား။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်၏ Pfaus ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် အဘယ်သူသည်အဘယျသို့အဘယ်မှာရှိသည့်အခါ (နှင့်ဒီတစ်ခါလည်းတောင်မှအဘယ်ကြောင့်)? ဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုကြေး၏အတွေ့အကြုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire, ဦးစားပေးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ချိတ်ဆက် အဖြေသည်ဟုတ်သည်ဟုအကြံပြုသည်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်သုတေသနလည်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း / deathgrip တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, အဘယ်သူသည်အစစ်အမှန်လိင်ခဲ့နှင့်အတူစတင်မပြုခဲ့သူကိုအဘယ်ကြောင့် Oldtimers ရှင်းပြမယ် ရှေ့မှာ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အဟောင်းများကိုဖြစ်ကြပြီးယူဆရလိင်ဟော်မုန်းနှင့် dopamine ၏နုပျိုအဆင့်ဆင့်ချို့တဲ့ပင်တုန့်ပြန်-သော်လည်းပိုမိုလျင်မြန်စွာကျန်းကျန်းမာမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှပြန်လာ, ပညာရေးဖွံ့ဖြိုး?
စောစောစီးစီးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းသည်အမြန်နှုန်းနှုန်းဖြင့်စတင်သောယောက်ျားများအတွက်တစ်ခုတည်းသောအန္တရာယ်မဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါပိုးရှိသူအများစုသည်နောက်ဆုံးတွင်သတင်းပို့ကြသည် အများဆုံးစွဲဖို့ဘုံအပြုအမူတွေနဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်: သူတို့ရှောင်ကြဉ်ရသောအခါအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, မတရားသော, (ED အပါအဝင်) အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကြားမှဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း, တင်းမာမှုများနှင့်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေ။ ဤရွေ့ကားရောဂါလက္ခဏာတွေဟာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကို၏အကျိုးဆက်များဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့မြင်ကြပြီအဖြစ်, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဦးနှောက်-ထွက်ခွာ t ကိုထက် ပို. ပလပ်စတစ်များမှာစွဲလမ်းမှုကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့ပိုအားနည်းချက် eens ။
သော့ကိုနှစျယောကျ စွဲ-related အပြောင်းအလဲများ ဟုခေါ်ကြသည် desensitization နှင့် sensitive က အသီးသီး။ Desensitization အားလုံးအပျြောအပါးမှတုံ့ပြန်မှု၏တစ် ဦး ယေဘုယျခေါ်ဆိုခြင်း ... အခြေခံပြောင်းလဲမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ “ ငါမလုံလောက်ဘူး” ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတယ်။ အသိ ဦး နှောက်သည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အထူးအချက်များအပေါ်တွင်သာတုံ့ပြန်မှုသည် hyper-reactivity / excitement ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်လျစ်လျူရှုရန်ခက်ခဲသောစွဲလမ်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်သည်။
အတူတကွဤအပြောင်းအလဲများကို ဘာကြောင့် porn ဘာကြောင့်အလုပ်လုပ်ရတာလဲ၊။ တချို့ကယောက်ျားတွေကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်ဖို့သူတို့ရဲ့ဦးနှောက် rewire ဖို့အများကြီးလအတွင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားတွေမ အသိပေးစာ ကြောင်း highspeed porn သူတို့ရဲ့လိင်သဘာ rewiring သလဲ?
အမြန်နှုန်းမြင့် porn ၏စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းနှင့်ထိတ်လန့်ပါဝင်သည် အစွမ်းထက်ပေမယ့်သဘာဝ, aphrodisiacဒါကြောင့်ထိုအအသုံးပြုသူများအနိုင် အမြဲ သူတို့အလုံအလောက်စောင့်ကြည့်လျှင် porn မှချွတ်ရ, ဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးအစွန်းရောက်, ပစ္စည်း။
ဦး နှောက်သည်တကယ့်အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းသောကြောင့်စိုက်ထူမှုစွမ်းအား၏ယိုယွင်းပျက်စီးမှုသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်သည်။ ဤအတောအတွင်းသူတို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိုးစားရန်မစဉ်းစားပါ မပါဘဲ porn, ဒါကြောင့်ပျက်စီးယိုယွင်းဖုံးအုပ်လျက်ရှိသည်။
ထိုအချိန်တွင်အချို့သောအမျိုးသားများသည်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုသည်ဘာလဲဆိုတာကိုရိုးသားစွာမသိကြသောကြောင့်၊ အပျိုဖော်ဝင်ချိန် မှစ၍ သူတို့၏သူငယ်ချင်းများကဲ့သို့ညစ်ညမ်းသောနတ်သမီးပုံပြင်ထဲ၌ပိတ်ဆို့ခံထားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အစစ်အမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုတွင်သူတို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါက၎င်းသည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အရက်၊ ပေါင်းပင်များ၊ ဆံပင်မှားယွင်းခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏အဖော်၏အရေပြားအရောင်၊ စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကင်းမဲ့ခြင်းစသည်တို့အပေါ်အမြဲတမ်းအပြစ်တင်နိုင်သည်။
ယနေ့ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏အဓိကအကြံဥာဏ်သည်လိင်မှုဆိုင်ရာအရသာများသည်နှစ်ဆယ့်နှစ်ဆယ်အတွင်းမပြောင်းလဲနိုင်သော၊ ညစ်ညမ်းသောအန္တရာယ်မရှိသော၊ ဿုံပုံမှန် နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမသက်ဆိုင်သော။ (ဟမ်?)
ဘယ်လောက်ကြာကမိတ်ဖက်ဖို့ rewire မှယူပါသနည်း
အချိန်အရှည်ကိစ္စရပ်များစွဲ, ဒါပေမယ့်ဒါဦးနှောက် plasticity ၏ဒီဂရီပါဘူး။ ဦးနှောက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအမြန်နှုန်းမှာပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ယင်းကိုစဉ်းစားပါ စွဲလမ်းပြန်လည်နာလန်ထူရလဒ်များကို မျောက်များ၏ဤအုပ်စုသည်။ (မှတ်ချက် - သိပ္ပံပညာရှင်များသည် desensitization နှင့်၎င်း၏ပြောင်းပြန်ကိုတိုင်းတာကြသည်။ )
သုံး [မျောက်ဝံများ] သာအဘို့ကိုကင်းထိတွေ့အတွက် တစ်ပတ်[ပုံမှန် dopamine အချက်ပြ] အခြေခံ, Pre-မူးယစ်ဆေးအဆင့်ဆင့်မှပြန်လာသော သုံးပတ်အတွင်း.
ငါးဘာသာရပ်များသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်း တကျိပ်နှစ်ပါးသောလများ ကိုကင်း abstinence စဉ်အတွင်းလေ့လာခဲ့ခဲ့ကြသည်။ ငါးဘာသာရပ်များသုံးခု [ပုံမှန် dopamine အချက်ပြ] ၏ပြည့်စုံနာလန်ထူပြသ abstinence ၏သုံးလအတွင်း, အခြားသော်လည်း နှစ်ခုဘာသာရပ်များ abstinence ၏တစ်နှစ်အကြာတွင်မရပြန်။ ပြန်လည်နာလန်ထူ၏နှုန်းမှာကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတကျိပ်နှစ်ပါးလအတွင်းစုစုပေါင်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုမှဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ကျနော်တို့ကယူဆ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ ကိုကင်းစွဲသည်ထက် "ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်" သည်, ဒါပေမယ့် အဘယ်သူမျှမသေးသိတယ်။ ယခုပင်လျှင်ကျနော်တို့အဘယ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန် / စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအပြည့်အဝတစ်နှစ်အကြာတွင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်သည်မဟုတ်ယောက်ျားကနေနားထောင်ကြလော့။
စွဲလမ်း၏အန္တရာယ်တစ်လောကလုံးမဟုတ်ပါဘူးစဉ်ကအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ် စွဲ-related အပြောင်းအလဲများ ဦးနှောက်အတွက် reverse ဖို့ခက်ခဲတဲ့နိုင်ပါတယ်။
(တစ်စုံတစ်ဦးကိုသာမန်လိင်ဆက်ဆံဖို့လုံလောက်တဲ့ပြန်လည်သက်သာပင်အပြီး, သူလကြာဆက်လက်တိုးတက်မှုများတွေ့မြင်ဖွယ်ရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ )
ပထမယောက်ျား - (၁၈ နှစ်) ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံသောအခါ, ငါ့စိုက်ထူပြန်ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ငါသုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် handjob နှင့်အတူအော်ဂဇင်သာနိုင်. ငါလိင်အကျင့်ယိုယွင်းခဲ့တယ်, ငါ porn မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသကဲ့သို့။ ငါအာရုံအာရုံစိုက်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ငါလုံးဝအနားယူပြီးငါ့လိင်တံနှင့်အာရုံခံစားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ် ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်ကျိန်းသေအသစ်တစ်ခုပါ။ လိင်အင်္ဂါမှလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အလွန်ကွာခြားပါတယ်
ငါလိင်ခဲ့မတိုင်မီ3ယခုရက်အတွင်း4အကြောင်းအဘို့, ငါသည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲရိုးတလျှောက်ငါ့လက်ချောင်း running, ငါ့လိင်တံလိုက်ပါတယ်။ ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်စဉ်ကိုငါအာရုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ငါငါ့လိင်တံပေါ်နှင့်အာရုံခံစားမှုအာရုံစိုက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့ကျွန်မကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ရပ်တန့်ဖို့အရေးကြီးသောအရာများကို:
-Relax: သင့်တကိုယ်လုံးအနားယူရမည်ဖြစ်သည်။ တိုင်းကြွက်သား, အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့လိင်တံ။ သငျသညျသတိရှိရှိလုပ်ရန်ရှိသည်။
ယင်းအာရုံအပေါ် -Focus: သင်ဖို့ရှိသည်ဆိုပါကသင်၏မျက်စိပိတ်လိုက်ပါ။ ယင်းအာရုံသတိထားဖြစ်လာထိုသို့ခံစားရသည်။
- နှေးကွေးခြင်း - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအော်ဂဇင် (သို့) သုတ်သင်ရန်အတင်းအကျပ်မပြုပါနှင့်။ အရာအားလုံး၏ဒုတိယတစ်ခုချင်းစီကိုခံစားပါ။ အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းဆိုသည်မှာသင်သည်စိတ်အေးအေးထားခြင်းမရှိဘဲအာရုံခံစားမှုကိုအာရုံမစိုက်ဘဲ orgasm သို့ရောက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဦး တည်ရာကိုမဟုတ်ဘဲခရီးကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။ သငျသညျနောက်ဆုံးမှာအဲဒီမှာရပါလိမ့်မယ်
- ဆက်လုပ်မယ်။ သင်က orgasm နဲ့ဝေးနေတယ်လို့ခံစားနေရတုန်းပဲ။ အနားယူပါ၊ အာရုံစိုက်ပါ၊ နှေးပါ၊ ဆက်လုပ်ပါ။
ဒုတိယအကောင်လေး - ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်ရေရာဂစိတ်မှတစ်ကိုယ်ရေရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတစ်နှစ် (၁/၃) အထိ (ပြန်လည်မရသဖြင့်၊ အမာခံမရှိ) အပျော်အပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မရဲ့ခံစားချက်ကတိုးလာတယ် တကယ့်ဘဝဘ ၀ မှဥပမာ - စန္ဒရားတေးဂီတကိုနားထောင်ခြင်း၊ မက်မွန်သီးစားခြင်း၊ သို့သော်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်အတွင်းပိုမိုပျော်ရွှင်လာခဲ့သည်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥယျာဉ်မှမက်မွန်သီးကိုစားခြင်းသည် (orgasm ကဲ့သို့) (သိသိသာသာမခိုင်မာကြောင်း) ဖြစ်သော်လည်းကြာရှည်ခံသည်။ ၎င်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းရုံမျှမကစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောကျေနပ်မှုလည်းမဟုတ်ပါ။ IMHO ၏အကြောင်းအရင်းမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကို porn မှရပ်တန့်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
တတိယကောင်လေး: ငါ့မှာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ porn-related ED ကနေငါအရှည်ဆုံးပြန်ကောင်းတစ်ခုရခဲ့တာပဲ။ ဒါကြောင့်ရလဒ်တွေမရှိခြင်းကြောင့်စိတ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပထမ ဦး စွာတစ် ဦး တသမတ်တည်းမိတ်ဖက်ရတဲ့ငါ့အဘို့ပြုဘာလဲ။ ကြောင်းစိတ်ပျက်ခြင်းမပြုမီငါမြင်အားလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ Reboot ပြပြီး ၇ လမှစပြီးလိင်မသွားခင်မှာပရောပရည်ပြုခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊ ဒါကတဖြည်းဖြည်းငါ့ကိုနောက်တဖန်သွားတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့အချိန်ကာလတိုလေးအတွင်းမှာပဲငါခက်ခဲပြီးထိုးဖောက်ဖို့“ အလျင်အမြန်” ခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အချိန်တိုင်းငါစိုက်ထူမှုတွေကပိုမိုအားကောင်းလာတယ်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်မြင့်တက်သွားသည် - လေ့ကျင့်ခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံစေသည်။
ကိုယ့်သုညအခက်အခဲနှင့်တသားတညဉ့်အခါလိင်သုံးကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါဒီခရီးစဉျတှငျစတင်ကတည်းကလာကြပြီဘယ်လောက်ဝေးမယုံကြည်နိုင်ပါ။ ယခုတွင်ငါသည်ရုံညင်ညင်သာသာငါချစ်ရာသခင်နမ်းခြင်းဖြင့်ခက်ရစိုက်ထူအရည်အသွေးနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကိစ္စများရှိသည်။ ငါ masturbate မှသုညအလိုဆန္ဒရှိသည်။ ငါသည်ငါ့လိင်စိတ်တိုးတက်စေရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်သေချာဖြစ်ကြောင်းကိုအဖြစ်စတင်မှာမှတ်စု၏ဘာမျှမခဲ့ကြသောငါ၏ orgasm (သို့သော်တဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းဆည်းပူးကြပါပြီ) ။ အရာအားလုံးငါ့အဘို့ဤမျှကာလပတ်လုံးတာနှင့်အတူ, ငါသာယခု မှစ. တစ်နှစ်ပြောင်းလဲမှုများစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။9လနှင့်ငါပြီးသားတစ်ဦးပြောင်းလဲယောက်ျားသည်ဖြစ်၏။ တကယ့်ဖက်ကိုရယူပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးက (မင့်လိင်) နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အချိန်ကိုယူပါ။ ဒါဟာဖော်ပြရန်လွန်းအင်အားကြီးတစ်ရပ်အတှေ့အကွုံဖြစ်ပါတယ်။ ငါအဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်ငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမှတဆင့်သွားကြဖို့ရှိပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
စတုတ္ထကောင်လေး: (Oldtimer) ငါနှစ်ပေါင်း 40 fapped ... ရန် ... .porn !! ပြီးခဲ့တဲ့ ၃.၅ နှစ်တိုင်အောင် ED ပြproblemနာမရှိခဲ့ဘူး။ ပြွန် - ဆိုဒ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်အဓိကပြ,နာများဖြစ်စေသော်လည်းကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ ငါကအသက်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါပုံပန်းသဏ္ဌာန်မရှိတော့ဘူး၊ ပျင်းစရာကောင်းတာပဲ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…ငါဘယ်လိုသင်ယူရမလဲလို့စဉ်းစားမိတယ် အင်တာနက်ကို porn ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက် overloads သူတို့နှင့်အတူစစ်မှန်သောမိန်းကလေးများနှင့်လိင်မှတုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အခုတော့ငါခြောက်လမရှိဘဲသွားပြီရုံကြောင့်ထင်ယောင်ထင်မှားအောက်မှာငါမဟုတ်ပါဘူး မဆို ငါအခုအင်တာနက်မဟုတ်တဲ့ porn ကိုပြန်သွားနိုင်ပြီ။ ငါစနစ်ကိုထာဝရပျက်စီးသွားပြီဟုငါယုံကြည်သည် ဒါကြောင့်ငါစီးကရက်ကိုဆေးလိပ်သောက်တာထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူး။ နှစ် ဦး စလုံးငါ့ကိုကွင်းဆက် - ဆေးလိပ် / အငွေ့ပြန်စေတဲ့မြေပေါ်ပြန်ရောက်စေတဲ့အတွက်။ ဒီမှာကန်ဒါပါ အနှစ် ၄၀ လုံးလုံးကျွန်တော်ဟာ ED မဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကျိုးပဲ့ခဲ့တယ်။
မိန်းမတွေအားလုံးအရာရာတိုင်းကိုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်၊ သူတို့မသက်မသာမဖြစ်ကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး၊ ထောင်သောင်းမကသောမိန်းကလေးငယ်များကကျယ်လောင်စွာအော်ဟစ်ငိုကြွေးကြသည်
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောလိင် (အမျိုးသမီးတွေထဲကအရာဝတ္ထုကိုစသည်တို့ကိုမတ်ေတာ, ဂုဏ်သိက္ခာ, လေးစားမှု, ကြင်နာမှု, သူတို့နှင့်အတူများကိုအလွန်အမင်းနည်းနည်းမရာ) porn လိင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်
မည်သည့်အမျိုးသမီးနှင့်မျှလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကျွန်ုပ်လုံးဝကျေနပ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ သူမဘာပဲလုပ်လုပ်၊ သူမဘယ်လောက်ကြာကြာလုပ်ကိုင်ခဲ့သလဲစသည်ဖြင့်ဘယ်တော့မှမလုံလောက်ပါ
ငါသူတို့နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဆက်ဆံရေးအတွက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ... သူမ pissed သို့မဟုတ်သမျှလျှင်, ငါငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကျေဖို့ငါ့အ porn porn နှင့်တူခဲ့
လိင်ဆက်ဆံမှုသည်အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးပြီးနောက်ကလေးဘဝတုန်းကကဲ့သို့အံ့သြစရာမကောင်းခဲ့ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအလွန်ကောင်းသည်၊ သို့သော်မယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ သူမအတွင်းရှိဆဲလ်တိုင်းကိုကျွန်ုပ်နှင့်သူအားလုံးအပေါ်ထိခြင်း ငါ့ကိုငါပေါက်ကွဲစေတဲ့လျှပ်စစ်အပျော်အပါးကိုအချက်ပြတဲ့ဆဲလ်တွေ…အခုထပ်လုပ်တယ်…
အမြားအပွား, နှစ်ပေါင်းများစွာသူများအမှုအရာမှိုင်းဖြစ်လာရာဘဝ (အရောင်များ, ဂီတ, ထိတွေ့, စကားပြောဆိုမှု, ဟာသ, အခြားသူများကူညီပေးနေ, ကြင်နာဖြစ်ခြင်း, အခြားသူများထံမှကြင်နာမှုကြုံနေရ, etc) ကိုနှစ်သက်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုယခုအလွန်အမင်းပျြောမှေ့စဖြစ်ကြသည် ..
ပဉ္စမကောင်လေး: ငါကောလိပ်ကျောင်းမှာငါ ED ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိလာတယ်။ ပထမတော့ကွန်ဒုံးသုံးတဲ့အခါတိုင်းငါစိုက်ထူမှုကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအများအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ / သို့မဟုတ်အရက်မူးနေခြင်းကြောင့်ဟုဆိုသည် PMO နှင့် ED တို့ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟူသောအတွေးသည်ယခုအချိန်တွင်နာကျင်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ အချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှငါပိုဆိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေကို PMO ကိုဆက်သွားတယ်။ ED ကပိုဆိုးလာတယ်။ ငါမရှိတော့ကွန်ဒုံးမရှိ, သမ္မာသတိရှိကြလော့နှင့်အဆင်ပြေမိန်းကလေးနှင့်အတူစိုက်ထူနိုင်ဘူး။ ဤတွင်ကျွန်ုပ် Viagra သို့ပထမဆုံးဆေးညွှန်းကိုရခဲ့သည်။ အသက် ၂၄ နှစ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ရုံးခန်းကနေထွက်သွားတာငါဘယ်လောက်ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပြitနာရဲ့လက္ခဏာကိုသာဖုံးကွယ်ထားပေမဲ့အဲဒါကငါ့ကိုလိင်ဆက်ဆံခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ဘဝမှာအဆိုးရွားဆုံးအမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ ၃-၄ နှစ်တာကာလရဲ့အစပဲ။ ငါပညာသင်နှစ်အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့်, အလုပ်ခွင်၌ငါစိတ်ဓာတ်ကျနှင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းရှိ၏ ဒီလိုငယ်ရွယ်စဉ်မှာနာတာရှည် ED ကငါ့ကိုစုတ်ဖြဲပစ်လိုက်တယ်၊ ငါမှာ IDEA porn မရှိဘူး။ [သူ့ post ကိုကြည့်ပါ ပျော်ရွှင်ရလဒ်ကို.]
ဆဋ္ဌမကောင်လေး: ငါ့ရဲ့ MRI လိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအမျိုးမျိုး၊ ကျောရိုး - ကျောရိုးအရည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ endocrine ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုအကြောင်းငါ့ကိုတစ်ယောက်မှမမေးခဲ့ဘူး။ ထိုအခါမူကားငါ porn စွန့်လွှတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ၇ ပတ်ကြာအောင်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ရှားခဲ့တယ်။ အပတ် ၇ မှာတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ တတိယအကြိမ်မှာငါတို့အတူတူအိပ်ယာထဲမှာအတူထိုင်၊ စကားပြောနေရင်းဖြစ်ခဲ့ကြတာ။ ၁ နာရီ ၂၀ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်မရပ်မနားကြာရှည်စွာရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသိသာသောအရာလုပ်နေတာမဟုတ်ပေမယ့်အစားရံဖန်ရံခါကဲ့ရဲ့ရုံအတော်လေးပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာငါတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖန်တီးပြီးနောက်ဆုံးမှာငါဟာအစွန်းကိုဖြတ်ပြီးရက် ၅၀ အတွင်းပထမဆုံးအော်ဂဇင်စတင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်နာကျင်မှုမရှိတာကိုနောက်နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာ (စိတ်ဓာတ်မကျပေမယ့်ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်ဆိုးနဲ့ဆင်တူတဲ့အရာတစ်ခု) ခံစားမိပေမယ့်နာကျင်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်သက်သာခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲစိုက်ထူမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူမကိုများစွာချစ်ခင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ပတ်အကြာမှာသူမနဲ့ထပ်တွေ့တဲ့အခါတစ်ညတည်းမှာပဲ ၃ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါပျောက်ကင်းသွားပြီဟုစိတ်ချလက်ချပြောနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်!
မကြာမီကသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၏အားနည်းချက်အားနည်းချက်များကိုတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ အခုတော့ဒါကမင်းရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းပဲ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပါ။
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 45 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) ။
သုတေသနသည်နုပျိုသော ED ၌များပြားလာခြင်းကိုအတည်ပြုသည်
porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 40 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များအားဖြင့် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဒါဟာ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်စာပေတစ်ခုကျယ်ပြန့်သုံးသပ်မှုပါပဲ။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖော်နောက်ဆုံးပေါ် data တွေကိုပေးပါသည်။ အဆိုပါစက္ကူကိုလည်းညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောလေ့လာမှုများကို examine ။ အဆိုပါဆရာဝန်များက porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသောလူတို့၏3လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများသည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်။